Ozi Ọma Luk Dere 4:1-44
Ekwensu nwara Jizọs ọnwụnwa (1-13)
Mgbe Jizọs malitere ikwusa ozi ọma na Galili (14, 15)
Ndị Nazaret jụrụ Jizọs (16-30)
Mgbe Jizọs gara n’ụlọ nzukọ dị na Kapaniọm (31-37)
Jizọs gwọrọ nne nwunye Saịmọn nakwa ndị ọzọ (38-41)
Ìgwè mmadụ hụrụ Jizọs ebe ndị mmadụ na-anaghị anọkarị (42-44)
4 Jizọs wee si n’Osimiri Jọdan pụọ, mmụọ nsọ eduru ya gaa n’ala ịkpa+ 2 ruo ụbọchị iri anọ. Ebe ọ na-erighị ihe ọ bụla n’ụbọchị ndị ahụ, agụụ gụwara ya mgbe ụbọchị ndị ahụ gachara. N’ihi ya, Ekwensu nwara ya,+ 3 sị: “Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, gwa nkume a ka ọ ghọọ achịcha.” 4 Ma Jizọs sịrị ya: “E dere, sị, ‘Ọ bụghị naanị achịcha ga-eme ka mmadụ dị ndụ.’”+ 5 N’ihi ya, Ekwensu kpọọrọ ya gaa n’otu ugwu, gosi ya alaeze niile nke ụwa n’otu ntabi anya.+ 6 Ekwensu wee sị ya: “M ga-enye gị ikike a niile na ebube ha, n’ihi na e nyefeela ha n’aka m,+ ọ bụkwa onye ọ bụla m chọrọ ka m ga-enye ha. 7 N’ihi ya, ọ bụrụ na i fee m ofufe,* ha niile ga-abụ nke gị.” 8 Jizọs asị ya: “E dere, sị, ‘Ọ bụ Jehova* bụ́ Chineke gị ka i kwesịrị ife ofufe, ọ bụkwa naanị ya ka i kwesịrị ijere ozi.’”*+ 9 O wee duru ya banye Jeruselem ma mee ka o guzoro n’elu ihe a rụbichiri n’elu ụlọ nsọ, wee sị ya: “Ọ bụrụ na ị bụ ọkpara Chineke, si ebe a wụda,+ 10 n’ihi na e dere, sị, ‘Ọ ga-enye ndị mmụọ ozi ya iwu banyere gị, ka ha chebe gị.’ 11 E dekwara, sị: ‘Ha ga-eji aka ha ghọrọ gị, ka ị ghara ịkpọ ụkwụ na nkume.’”+ 12 Jizọs asị ya: “E kwuru, sị, ‘Anwala Jehova* bụ́ Chineke gị ọnwụnwa.’”+ 13 Mgbe Ekwensu nwachara ya ọnwụnwa ahụ niile, o si ebe Jizọs nọ pụọ ka ọ dịwa oge ọzọ ga-adaba adaba.+ 14 Jizọs wee laghachi Galili,+ mmụọ nsọ na-edukwa ya. Ndị bi gburugburu ebe ahụ nọkwa na-ekwu okwu ọma banyere ya. 15 Ọ malitekwara izi ihe n’ụlọ nzukọ ha, mmadụ niile na-ajakwa ya mma. 16 O wee gaa Nazaret,+ bụ́ ebe ọ nọ too, banye n’ụlọ nzukọ+ otú ọ na-emekarị n’Ụbọchị Izu Ike, wee guzo ọtọ ka ọ gụọ ihe. 17 E wee nye ya akwụkwọ mpịakọta Aịzaya onye amụma. O meghekwara akwụkwọ mpịakọta ahụ ma chọta ebe e dere, sị: 18 “Jehova* nyere m mmụọ ya, n’ihi na o tere m mmanụ izi ndị ogbenye ozi ọma. O zitere m ka m gwa ndị e ji eji na a hapụla ha, na ime ka ndị ìsì malite ịhụ ụzọ, na ịhapụ ndị a na-echi ọnụ n’ala ka ha lawa,+ 19 nakwa ikwusa gbasara oge Jehova* ji anabata ndị mmadụ.”+ 20 O wee fụkọta akwụkwọ mpịakọta ahụ, nyeghachi ya onye na-eje ozi ebe ahụ ma nọdụ ala. Ndị niile nọ n’ụlọ nzukọ ahụ wee legide ya anya. 21 O wee bido ịsị ha: “Taa ka ihe a e dere n’Akwụkwọ Nsọ unu nụrụ ugbu a mezuru.”+ 22 Ha niile wee malite ikwu okwu ọma banyere ya. Otú o si na-ekwu okwu na-eru ha n’obi tụkwara ha n’anya,+ ha ana-asị: “Onye a ọ́ bụghị nwa Josef?”+ 23 O wee sị ha: “Ama m na unu ga-asị m, ‘Ọgwọ ọrịa, gwọọ onwe gị. Ihe ndị ahụ anyị nụrụ i mere na Kapaniọm,+ mee ha ebe a, n’obodo gị.’” 24 N’ihi ya, ọ sịrị: “N’eziokwu, ana m asị unu na o nweghị onye amụma a na-akwanyere ùgwù n’obodo ya.+ 25 Dị ka ihe atụ, n’eziokwu, ana m asị unu: N’oge Ịlaịja dị ndụ, e nwere ọtụtụ ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ n’Izrel mgbe e mechiri eluigwe ka mmiri ghara izo afọ atọ na ọnwa isii, nke mere ka oké ụnwụ daa n’ala a niile.+ 26 Ma e zighị Ịlaịja ka ọ gakwuru nke ọ bụla n’ime ụmụ nwaanyị ndị ahụ, kama naanị onye e ziri ya ka ọ gakwuru bụ otu nwaanyị di ya nwụrụ na Zarefat dị na Saịdọn.+ 27 E nwekwara ọtụtụ ndị ekpenta n’Izrel n’oge Ịlaịsha onye amụma dị ndụ. Ma o nweghị onye n’ime ha a gwọrọ. Ọ bụ naanị Neeman onye Siria ka a gwọrọ.”+ 28 Iwe wee ju ndị niile na-anụ ihe ndị a n’ụlọ nzukọ ahụ obi,+ 29 ha ebilie kpụrụ ya gaa n’azụ obodo ahụ ọsọ ọsọ. Ha duuru ya gaa n’ọnụ ọnụ ugwu, ebe obodo ha dị, ka ha wee tụda ya ka o jiri isi daa. 30 Ma o si n’etiti ha mịfere gawara onwe ya.+ 31 O wee gbadaa Kapaniọm, bụ́ obodo dị na Galili. O wee na-ezi ha ihe n’Ụbọchị Izu Ike.+ 32 Otú o si ezi ihe jukwara ha anya,+ n’ihi na ọ na-ezi ha ihe ka onye Chineke nyere ikike. 33 Ma n’ime ụlọ nzukọ ahụ, e nwere otu nwoke mmụọ ọjọọ ji, onye tiri mkpu,+ sị: 34 “Jizọs onye Nazaret,+ gịnị jikọrọ anyị na gị? Ị̀ bịara ibibi anyị? Ama m gị nke ọma, Onye Nsọ nke Chineke.”+ 35 Ma Jizọs baara ya mba, sị: “Mechie ọnụ, sikwa n’ime ya pụta.” N’ihi ya, mgbe mmụọ ọjọọ ahụ tụchara nwoke ahụ n’ala n’etiti ha, o si n’ime ya pụta n’emerụghị ya ahụ́. 36 O wee ju mmadụ niile anya, ha amalitekwa ịgwa ibe ha, sị: “Olee ụdị okwu bụ ihe a? N’ihi na o ji ikike na ike o nwere na-enye ndị mmụọ ọjọọ* iwu, ha ana-apụ.” 37 N’ihi ya, ndị mmadụ nọ na-akọsa banyere ya n’ebe niile gburugburu obodo ahụ. 38 Mgbe o si n’ụlọ nzukọ ahụ pụọ, ọ banyere n’ụlọ Saịmọn. Ma oké ahụ́ ọkụ ji nne nwunye Saịmọn, ha rịọkwara ya ka o nyere ya aka.+ 39 O wee guzoro ya n’akụkụ mee ka ahụ́ ọkụ ahụ kwụsị. Nwaanyị ahụ biliri ozugbo jewere ha ozi. 40 Ma mgbe anyanwụ na-ada, ndị niile nwere ndị na-arịa ụdị ọrịa dị iche iche kpọọrọ ha bịakwute ya. Ọ na-ebikwasị onye nke ọ bụla n’ime ha aka n’isi gwọọ ya.+ 41 Ndị mmụọ ọjọọ sikwa n’ime ọtụtụ mmadụ pụta, na-eti mkpu, sị: “Ị bụ Ọkpara Chineke.”+ Ma, ọ na-abara ha mba. Ọ naghịkwa ekwe ka ha kwuo okwu,+ n’ihi na ha ma na ọ bụ ya bụ Kraịst.+ 42 Ma mgbe chi bọrọ, ọ pụrụ gawa n’ebe ndị mmadụ na-anaghị anọkarị.+ Ma ìgwè mmadụ ahụ malitere ịchọ* ya, wee bịarute ebe ọ nọ. Ha gbalịkwara ka ọ ghara isi ebe ha nọ pụọ. 43 Ma ọ sịrị ha: “M ga-ekwusarịrị ozi ọma Alaeze Chineke n’obodo ndị ọzọ, n’ihi na ọ bụ ya mere e ji zite m.”+ 44 N’ihi ya, ọ gara n’ụlọ nzukọ ndị dị na Judia na-ekwusa ozi ọma.
^ Ma ọ bụ “i fee m otu ugboro.”
^ Ma ọ bụ “ijere ozi dị nsọ.”
^ Ma ọ bụ “ịchọgharị.”